Pad Kwakamira Shanduri Zvidimbu Vagadziri & Vatengesi | China Pad Yakakwidzwa Shanduko Zvidimbu Fekitori
35kV Oiri-yakanyudzwa maviri-chinzvimbo loadbreak break switch
Oiri-yakanyudzwa ina-chinzvimbo loadbreakbreak switch
12kV 630A Oiri-yakazadza ina-chinzvimbo chinzvimbo mutoro switch yakagadzirirwa ringi-mhando US-bhokisi mhete shanduko kabhineti yakagadzirirwa kusangana neIEEE, IEC uye GB zviyero zvezvose zvinodiwa. Inogona kushandiswa muvhu kana pasi pevhu masisitimu. Oiri-yakanyudzwa ina-chinzvimbo mutoro chinja mune iyo yekumisikidza, padyo neshanduko kiyi inogona kudzikisira yemukati kubatana Cable capacitance, uye nekudaro zvakanyanya kudzikisa chiuno mu ferromagnetic resonance. Ose mativi ekumisikidza uye ekumusoro ekumisikidza anowanikwa Kune zvakajairika ...
Oiri-yakanyudzwa mbiri-chinzvimbo loadbreak switch
Oiri-yakanyudzwa maviri-chinzvimbo loadbreak switch inowanzoshandiswa kuchinjisa mhando American bhokisi shanduko, ine chitubu yekushandisa mashandiro, idanho-rechitatu nhanho yekubatanidza switch yekupedzisa mutoro kupaza nekuvhara mashandiro. Nemaviri maviri-chinzvimbo mutoro ma switch anokwanisa zvakare kuverengerwa nemhete-yerudzi switching system yeyeye-mhando yekuparadzira system, maviri-chinzvimbo switch state: on, off. 10kV chiyero chinogona kushandiswa kumagetsi emagetsi mapurojekiti mukushandisa kweanoshandura. Usati washandisa iyo transformer inoda kuomeswa. M ...